Tsy misy mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-02 > Tsy misy manasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra
«Miady hevitra imbetsaka i Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana fa heverintsika amin'i Kristy fa raisin'Andriamanitra ho nohamarinina isika. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia manohitra ny taloha taloha izay nohomboana tamin'i Kristy; Ny fahotantsika dia tsy azo oharina amin'ny ao amin'i Kristy. Manana adidy hiady amin'ny ota isika - tsy ho voavonjy, fa satria efa zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny tapany farany amin'ny toko faha-8, dia mifantoka amin'ny hoavintsika be voninahitra i Paoly.
Miandry antsika ny zavaboary rehetra
Tsy mora ny fiainana kristianina. Tsy mora ny miady amin’ny ota. Tsy mora ny fanenjehana. Ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ao anatin'ny tontolo lavo miaraka amin'ny olona simba dia manasarotra ny fiainantsika. Hoy anefa i Paoly: “Fa ny fahoriana amin’izao andro izao dia tsy mahatohitra ny voninahitra izay haseho amintsika” (and. 18). Toy ny tamin’i Jesosy, dia fifaliana ho antsika koa izany — hoavy tena mahafinaritra ka ho toa tsy misy dikany ny fitsapana mahazo antsika ankehitriny.
Tsy isika irery anefa no hahazo tombony amin’izany. Nilaza i Paoly fa misy sehatra ara-tontolo iainana amin’ny fanatanterahana ny drafitr’Andriamanitra ao anatintsika: “Fa ny fiandrasan’izao zavatra ary rehetra izao dia miandry ny hisehoan’ny zanak’Andriamanitra” (and. 19). Tsy vitan’ny hoe te hahita antsika ao amin’ny voninahitra ny zavaboary, fa ny zavaboary mihitsy koa dia ho voatahy amin’ny fiovana rehefa ho tanteraka ny drafitr’Andriamanitra, araka ny voalazan’i Paoly ao amin’ireo andininy manaraka hoe: “Ny zavaboary dia iharan’ny tsy fahatanterahana ... eny amin’ny fanantenana; fa ny zavaboary koa dia ho afaka amin’ny fanandevozan’ny tsi-fahatanterahana ho amin’ny fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra.” ( Andininy 20-21 ).
Mihena ny famoronana ankehitriny, saingy tsy izany no tokony ho izy. Amin’ny fitsanganana amin’ny maty, raha omena antsika ny voninahitra izay tokony ho an’ny zanak’Andriamanitra, dia ho afaka amin’ny fanandevozana koa izao rehetra izao. Navotana tamin’ny alalan’ny asan’i Jesosy Kristy izao tontolo izao manontolo (Kolosiana 1,19- iray).
Na dia efa voaloa aza ny vidiny dia tsy mbola hitantsika ny zava-drehetra satria Andriamanitra no hamita izany. “Misento ankehitriny ny zavaboary rehetra, toy ny hoe mihetsi-jaza.” ( Romana 8,22 Fandikan-teny Genève Vaovao). Mijaly toy ny mihetsi-jaza ny zavaboary satria izy no mandrafitra ny kibo izay nahaterahantsika. Tsy izany ihany, fa “fa isika, izay manana ny voaloham-bokatry ny Fanahy, dia mbola misento ato am-pony, miandry ny fananganan’anaka sy ny fanavotana ny tenantsika.” ( and 23 New Geneva Translation ). Na dia efa nomena antsika ho antoka famonjena aza ny Fanahy Masina dia miady mafy koa isika satria tsy mbola tanteraka ny famonjena antsika. Miady amin'ny fahotana isika, miady amin'ny fetra ara-batana, fanaintainana ary fijaliana - na dia mifaly amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika aza isika.
Ny famonjena dia midika fa tsy iharan'ny kolikoly intsony ny vatantsika (1. Korintiana 15,53) hohavaozina sy hovana ho voninahitra. Ny tontolo ara-batana dia tsy fako tokony hariana - Andriamanitra no nanao azy ho tsara ary Izy no havaozina indray. Tsy fantatsika ny fomba fitsanganan’ny vatana amin’ny maty, na ny fizika an’izao rehetra izao nohavaozina, fa afaka matoky ny Mpamorona isika mba hamita ny asany.
Mbola tsy mahita zavaboary tonga lafatra isika, na eo amin’izao rehetra izao, na eto an-tany, na ao amin’ny vatantsika, nefa matoky isika fa hiova ny zava-drehetra. Hoy i Paoly: “Fa voavonjy isika, nefa amin’ny fanantenana. Fa ny fanantenana hita dia tsy fanantenana; fa ahoana no hanantenanao ny zavatra hitanao? Fa raha manantena izay tsy hitantsika isika, dia miandry amin’ny faharetana » (Romana 8,24- iray).
Miandry amim-paharetana sy amim-paharisihana ny fitsanganan’ny vatantsika amin’ny maty isika rehefa tapitra ny fananganan’anaka antsika. Miaina ao anatin’ny toe-javatra “efa tsy mbola” isika: efa navotana, fa tsy mbola voavotra tanteraka. Efa afaka tamin’ny fanamelohana isika, fa tsy tanteraka tamin’ny ota. Efa ao amin’ny fanjakana isika, nefa tsy mbola ao anatin’ny fahafenoany. Miaina amin'ny lafiny amin'ny vanim-potoana ho avy isika raha mbola miady amin'ny lafiny amin'ity vanim-potoana ity. “Toy izany koa ny fanahy manampy ny fahalementsika. Fa tsy fantatray izay hivavahana, araka ny tokony ho izy; fa ny Fanahy kosa maneho antsika amin’ny fitarainana tsy hay lazaina” (and 26). Fantatr’Andriamanitra ny fetra sy ny fahadisoantsika. Fantany fa malemy ny nofontsika. Na dia mazoto aza ny fanahintsika, dia miditra an-tsehatra ho antsika ny fanahin’Andriamanitra, na dia mila zavatra tsy azo ambara aza. Tsy manaisotra ny fahalementsika ny Fanahin’Andriamanitra, fa manampy antsika amin’ny fahalementsika. Izy no mampifandray ny elanelana misy eo amin’ny taloha sy ny vaovao, eo amin’izay hitantsika sy izay nohazavainy amintsika. Ohatra, manota isika na dia te hanao ny tsara aza (7,14-25). Hitantsika eo amin’ny fiainantsika ny ota, fa Andriamanitra dia manambara antsika ho marina satria hitan’Andriamanitra ny vokany, na dia vao nanomboka aza ny dingana.
Na dia eo aza ny tsy fitovizan’ny zavatra hitantsika sy izay tadiavintsika, dia afaka matoky ny Fanahy Masina isika fa hanao izay tsy azontsika atao. Izy no hanafaka antsika. “Fa izay mandinika ny fo no mahalala izay sain’ny fanahy; satria izy no misolo tena ny olona masina araka izay ankasitrahan’Andriamanitra » (8,27). Ny Fanahy Masina dia eo anilantsika manampy antsika mba hatoky tena!
Nantsoina araka ny toroheviny na dia eo aza ny fitsapana sy ny fahalemena ary ny fahotantsika, dia “fantatsika fa ny zavatra rehetra dia mahasoa indrindra amin’izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany” (and. 28). Tsy Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra, mamela azy ireo ary miara-miasa aminy araka ny didiny. Manana drafitra ho antsika Izy ary azontsika antoka fa hahavita ny asany ao anatintsika Izy (Filipiana 1,6).
Efa nomanin’Andriamanitra mialoha fa ho tonga tahaka an’i Jesoa Kristy Zanany isika. Koa niantso antsika tamin’ny alalan’ny Evanjely Izy, nanamarina antsika tamin’ny Zanany, ary nampiraisiny taminy tamin’ny voninahiny: “Fa izay nofidiny no notendreny koa mba ho tahaka ny endrik’ny Zanany, mba ho lahimatoa eo amin’ny rahalahy maro. Fa izay notendreny no nantsoiny koa; fa izay nantsoiny no nohamarininy koa; fa izay nataony marina no nomeny voninahitra koa » (Romana 8,29- iray).
Mafana ny hevitry ny fifidianana sy ny fanendrena mialoha, nefa tsy manazava ny adihevitra ireo andininy ireo satria tsy mifantoka amin’ireo teny ireo eto (na any an-kafa) i Paoly. Ohatra, i Paoly dia tsy milaza ny amin’ny hoe avelan’Andriamanitra handà ny voninahitra nokasainy ho azy ireo ve Andriamanitra. Eto i Paoly, rehefa manakaiky ny fara tampon’ny fitoriany ny filazantsara, dia te hanome toky ny mpamaky fa tsy mila manahy momba ny famonjena azy izy ireo. Raha manaiky izany izy ireo dia ho azy koa izany. Ary ho fanazavàna ara-pitenenana, i Paoly aza dia miresaka momba an'Andriamanitra efa nanome voninahitra azy ireo tamin'ny fampiasana ny fotoana lasa. Tsara toy ny nitranga izany. Na dia miady mafy amin’izao fiainana izao aza isika, dia afaka miantehitra amin’ny voninahitra any aoriana.
“Inona no tiantsika holazaina momba izany ankehitriny? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Iza koa no tsy niaro ny zanany lahy, fa nanolotra azy hamonjy antsika rehetra, ka ahoana no tsy hanomezany antsika miaraka aminy ny zavatra rehetra? ( Andininy faha-31-32 ). Koa satria Andriamanitra dia nanolotra ny Zanany ho antsika fony isika mbola mpanota, dia afaka matoky isika fa hanome antsika izay rehetra ilaintsika mba hahavitana izany. Afaka matoky isika fa tsy ho tezitra amintsika izy ka hanala ny fanomezany. «Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? eto Andriamanitra Izay manamarina” (and. 33). Tsy misy afaka miampanga antsika amin’ny andro fitsarana satria nambaran’Andriamanitra fa tsy manan-tsiny isika. Tsy misy afaka manameloka antsika satria Kristy Mpanavotra antsika no mijoro ho antsika: «Iza no te hanameloka? Kristy Jesosy no eto, izay efa maty, na ny marimarina kokoa, izay natsangana koa, izay eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra sy misolo tena antsika” (and 34). Tsy vitan’ny hoe manana sorona noho ny fahotantsika isika, fa manana Mpamonjy velona koa izay miaraka amintsika mandrakariva eo amin’ny lalantsika mankany amin’ny voninahitra.
Ny fahaizan’i Paoly miteny dia aseho ao amin’ny faratampony mampihetsi-po amin’ilay toko manao hoe: “Iza no te hampisaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana sa tahotra sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? araka ny voasoratra (Salamo 44,23): “Fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva; hajaina toy ny ondry hovonoina isika” (and 35-36). Afaka mampisaraka antsika amin’Andriamanitra ve ny toe-javatra? Raha novonoina noho ny finoana isika, resy tamin’ny ady ve isika? Na izany na tsy izany, hoy i Paoly: “Amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika fatratra” (andininy 37 Elberfelder). Na dia ao anatin’ny fahoriana sy ny fijaliana aza isika dia tsy resy – tsara noho ny mpandresy isika satria mandray anjara amin’ny fandresen’i Jesosy Kristy. Ny lokantsika - ny lovantsika - dia ny voninahitra mandrakizay avy amin'Andriamanitra! Io vidiny io dia lehibe lavitra noho ny vidiny.
“Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na hery, na hery, na ankehitriny, na ho avy, na ambony na ambany, na inona na inona amin’izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika” (and. 38-39). Tsy misy mahasakana an’Andriamanitra amin’ny drafitra nomaniny ho antsika. Tsy misy mahasaraka antsika amin’ny fitiavany mihitsy! Afaka matoky ny famonjena nomeny antsika isika.